“Axeey, Wey iyo Ciil” | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM “Axeey, Wey iyo Ciil”
September 23, 2016 - Written by Mustafe Faro
W/Q: Garyaqaan Jamaal Axmed Ducaalle
Ri’dan aad arkaysaan waxa aan shalay oo ay taariikhdu ahayd 21/9/2016 aan kula kulmay kidinka Maxkamadda Sare,iyadoo ay askarta Maxkamadda Sare u gurayaan dhaameelka dhirta ku dhextaala maxkamadda. Waxa ay askartu ii sheegeen in ay habeen hore iyadoo dhalaysa oo ilmuhu ka soo jeedo ka bad baadiyeen ey eryanaysay oo cuni lahyd. Waxa kale oo ay ii sheegeen,kadib markii ay ka baqdeen hadii ay deyrka maxkamada u dayaan in bisaduhu ilmaha kaqaataan in geliyeen oo ay u hoyatay qol yar oo ka mid ah dhismayaasha maxkamadda.
Runtii askartaasi markii ay ii sheekeynayeen ee ay iiga waramayeen sida ay wax u dhaceen, iyaga kaliya war iyo sheeko ayay ka ahayd. balse aniga dareen kale oo qiiro iyo wax ku qaadasho ah ayuu warkoodu ii ahaa.
Waxa intii ay ila hadlayeenba iga dhex guuxaayay qiimaha iyo kaalinta ay askartu ilaalinta amnigeena iyo sugida xuduudaheena kaga jirto iyo sida aynu u hagranay ee ay daryeelka inooga la’yiihiin.
Waxa askartaasi, aad arkaysaan, ee dadkii iska daaye, xoolaheeni dayacmay bad baadinaysaa, ee hadh iyo habeen heeganka ku jirtaaa qaataan oo miisaaniyada qaranka kaga baxa waxaan nolashooda sinaba u kafeyn karin.
Askartaasi Ma weydiin, waxase suurto gal ah in xiligaasi ay ii waramayeen,ri’dana dhaameelka u gurayeen in qaarkood bilaa quraac ahaayeen. Waayo,waxa aan xusuustaa habeen sanad meelahaa laga joogo oo madaxtooyadeena xaflad lagu qabtay;in subaxii mid ka mid h askartii oo aan is idhi ka warayso xafladii bilicda sare lahayd ee habeenkaa madaxtooyada ka dhacday,in uu igu yiri ” waar igadaa inaadeer,haygu soo qaadine,gaajo ayay nagu dileen oo ilaa xalay bilaa casho ayaan halkaa ku fadhiyay”.
Ax,oo ayaan darinaa. waxa askarigeenaasi aad arkaysaan sida uu hadh iyo habeen hageenka ugu yahay gudashada waajibkiisa uu qaataa oo mushaharkiisu yahay $70 dolar. Halka xildhibaanada labada gole ee barlamaanka iyo guurtida oo degan meel aan ka fogayn #Boqol talaabo halka ay askartaasi ri’daasi ku bad baadisay, uu midkiiba qaataa lacag dhan $2200 Dolar.Iyadoo waliba midkeen kastaa ogyahay oo aynu ka dheregsan yahay sida ay shaqadoodi u daayaceen ee ay mooshin quutayaasha u yihiin.
Ma aha xildhibaanada oo qudha cida lacagta xad dhaafka ahi kaga baxdo qaranka,ee runtii mushaharka madaxweynaha,ku xigeenkiisa iyo wasiiraduna waa xad dhaaf,aanay macquul ahayn bixi toodu.Waxa waliba intaasi dheer kharashaadka bilaa macnaha ee ay sida joogtada ah u isticmaalaan, ee aanay habayaraatee jirin cid kala xisaabtanta iyo cid ku dabagashaana.
Hadaba muwaadin ma kula tahay in aynu arimahaasi dib u eegno,oo aynu gacmaha isu qabsano sidii cashuurta yar ee laynaga qaadaa ugu bixi lahayd halka ay ku haboon tahay, ee ay noqon lahyd mid lagu daryeelo ciidamada kala duwan ee qaranka; iyo sidoo kale shaqaale hoosaadka kale ee macalimiintu ugu horeyso.